Soo dejisan ImageJ 1.52 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaTifatiraha sawiradaImageJ
Bogga rasmiga ah: ImageJ
ImageJ – software ah si ay u falanqeeyaan iyo farsameeyo files image ah. software waa ay awoodaan in ay si waxtar leh u falanqeeyaan image iyo hesho xogta farsamada faahfaahsan. ImageJ taageertaa badan oo qaabab image iyo leedahay a qalabka tafatirka. software The u saamaxaaya in ay saaraan transformations joomatari kala duwan, la abuuro histogaraam cufnaanta, qaban muuqaalaynta 3D, u qabtaan hawlaha macquul ah iyo xisaabta dhexeeya images, iwm ImageJ waa ay awoodaan in ay isku mar la images badan ka shaqeeyaan, codsan filtarrada kala duwan oo ay u qabtaan processing Dufcaddii oo ka mid ah files. ImageJ ku jira plagins badan oo si weyn u kordhiyo awoodaha ee software-ka.
Arkaysid, falanqaynta, processing iyo tafatirka ee images
Fast iyo volumetric processing file
Taageerada ku dagtay
Zooming oo boggan ah images
Soo dejisan ImageJ
Faallo ku saabsan ImageJ
ImageJ Xirfadaha la xiriira
Tani waa utility si looga saaro dhammaan barnaamijyada Norton Security antivirus ee lagu rakibay nidaamkaaga, oo ay ku jiraan galalka diiwaanka iyo feylalka haraaga.